ချစ်ခြင်းအလင်္ကာများနှင့်ချစ်သူများနေ့ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
February 14, 2008, 5:48 am Filed under: Lin Let Kyal Sin, True Feelings ကျေးငှက်လေးတွေ တသီသီအော်မြည်နေသော မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ လန်းဆန်းစွာဖြင့် မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်လိုက်သည်။ အတွေးထဲမှာ ချက်ချင်းဝင်ရောက်လာတာက `ချစ်သူများနေ့´ ..။ ချစ်တတ်သူတိုင်းအားလုံးအတွက် ချစ်သူများနေ့က ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ .. ။ နှစ်တစ်နှစ်၏၁၂လထဲတွင် ဒီဇင်ဘာလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလကို ကျွန်မအချစ်ဆုံးဖြစ်သည်.. ။ အမှတ်တရနေ့ပေါင်းများစွာ ၊ ချစ်ခင်ကြင်နာမှုများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖေဖော်ဝါရီလသည် ကျွန်မအတွက်တော့ မရိုးနိုင်သော ချစ်ခြင်းအလင်္ကာလတစ်ခုပင်ဖြစ်နေမြဲ .. ။ ချစ်သူများနေ့မရောက်ခင်အချိန်မှာ အတွေးစိတ်ကူးများဖြင့် ကြိုတင်ရင်ခုန်ရသည် .. ။ ချစ်သူများနေ့ကို ကြိုဆိုရမည့် စိတ်ကူးများကို အတွေးထဲမှာ ပုံဖော်ရင်း ကြည်နူးမှုများလည်း ရင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
လူတိုင်းမှာ ချစ်တတ်သော နှလုံးသားတစ်စုံ ရှိနေပါလိမ့်မည် ။ `အချစ်´ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုတတ်ကြပေမယ့် ချစ်ခြင်းအလင်္ကာကတော့ ချစ်သူတိုင်းအတွက် တူညီသော ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ မိမိ၏ချစ်ခြင်းကို အမျိုးမျိုးဖွဲ့ဆိုပြသကြမည့် ချစ်သူများနေ့မှာ အချစ်နှင့်သက်ဆိုင်သော သင်္ကေတလက်ဆောင်လေးတွေ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖလှယ်ရင်း ဒီနေ့မှာတော့ ရီသံချိုချိုလေးတွေ နေရာတိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေမှာပါ။ အတွေးများဖြင့် စိတ်ကူးထဲမှ စကားပြောနေရင်း ကျွန်မဘ၀တစ်ခုလုံး၏အလင်းရောင်ဖြစ်သော `ချစ်သူ´ကို စိတ်ထဲမှ ခပ်တိုးတိုးလေး တမ်းတမိသည်။ အိပ်ချိန်ပင်လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘဲ စုပုံနေသော အလုပ်များကြား ပင်ပန်းစွာ အလုပ်များနေမည်ဖြစ်သော ချစ်သူ့အကြောင်း တွေးမိရုံလေးနှင့် သနားကြင်နာမိသည် .. ။ တစ်ချိန်က စိတ်အလိုမကျဖြစ်ခဲ့သောအရာများက ယခုအချိန်မှာ သနားကြင်နာခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားတာကို ချစ်သူကောင်းကောင်းသိပါလိမ့်မည်။ များပြားလွန်းသော အလုပ်များကြား နားချိန်ပင်မပေးနိုင်ပေမယ့် ပုံမှန်ဖုန်းဆက်တာတွေ ၊ နေမကောင်းချိန် ကျွန်မစိတ်တိုင်းကျ အကုန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာတွေ အားလုံးကိုတွေးမိတိုင်း ချစ်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကို နှလုံးသားမှာ ကျောက်စာထွင်းရေးထိုးထားမိသည်။ ချစ်သူ့အကြောင်း ရေးဖွဲ့ရလျင် ကျွန်မလက်ထဲမှ ဖောင်တိန်ချောင်းပျောက်ကွယ်သွားသည့်အထိ ရေးဖွဲ့၍ကုန်နိုင်မည်မထင်။ ချစ်သူကို ဘာကြောင့်ချစ်လဲဟု မေးတိုင်း သေချာသော အဖြေ ကျွန်မမှာမရှိခဲ့။ ချစ်သူနှင့် အနာဂတ်လမ်းပေါ်မှာ အတူလက်တွဲသွားချင်တာ ၊ အဆိုးအကောင်းအားလုံး တူညီစွာခံစားချင်တာ ၊ ချစ်သူအတွက် အကြင်နာမေတ္တာအားလုံးပေးအပ်ချင်တာ အစရှိသော ခံစားချက်များဖြင့် ချစ်သူကို မြတ်နိုးစွာ ကျွန်မ ချစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မနှင့်သူ၏ဘ၀မှာ အများဆုံးအဆင်ပြေချောမွေ့သလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာများကလည်း ပိုမိုခိုင်မာသထက် ခိုင်မာလာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဘ၀တစ်ခုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက်လည်း ကျွန်မ လွန်စွာကျေနပ်မိသည်။ အောင်မြင်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ကျင်လည်နေသော လူ့ဘ၀ထဲမှာ ဘ၀၏အနိမ့်အမြင့် ၊ အတက်အကျအားလုံးကို ချစ်သူနှင့်အတူ ကျွန်မရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်သွားမည်။ ချစ်တတ်သူတိုင်းအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေသော ချစ်သူများနေ့မှာ …. များပြားလွန်းသောအလုပ်များကြား Stress များစွာဖြင့် အလုပ်များနေမည်ဖြစ်သော ချစ်သူထံမှ ပေးနိုင်သော အချိန်တစ်ခုကိုသာ စောင့်စားနေမိသည်။ လေပြေနုနုလေးများဖြင့် ကြိုဆိုနေမည်ဖြစ်သော ညနေခင်းအချိန်အခါမှာ ကျွန်မချစ်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်အတွက် အမှတ်တရလေးတစ်ခုကိုလည်း ကြိုတင်စီစဉ်ထားဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာကံအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးချစ်သူရေ …. ငါလားကွယ် .. ။
မင်းအချစ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရပ်ဝန်းမှာငါ့ဘ၀ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုမီးအိမ်တစတစပိုမိုထွန်းလင်းလာခဲ့တယ် .. ။
မင်းအားပေးမှုတွေအောက်ငါ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းတွေပိုမိုရဲရင့်ခဲ့ .. မင်းအကြင်နာမျက်ဝန်းအောက်ငါ့စိတ်ဓါတ်တွေပိုမိုနူးညံ့ခဲ့ .. မင်းပေးတဲ့မေတ္တာအချစ်စစ်တွေနဲ့ငါပိုမိုနွေးထွေးခဲ့ချိန်မှာငါက …မင်းမြတ်နိုးမှုတွေကိုသရဖူဆောင်းပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပြည့်နှက်အားမာန်သစ်တွေပိုမိုတိုးရင်းဘ၀ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုသိမြင်လာရသူပါ .. ။
မင်းချစ်ခြင်းပန်းတွေဖွေးဖွေးလှုပ်ပွင့်နေတဲ့မေတ္တာဥယျာဉ်ထဲမှာငါ့ခြေလှမ်းတွေသက်ဆုံးတိုင်လှမ်းချင်တယ် .. ။
မင်းပျော်ရွှင်မှုတွေပွင့်လန်းမင်းစိတ်ဓါတ်တွေပိုမိုထက်မြက်မင်းဘ၀တစ်ခုလုံးပိုမိုအောင်မြင်ထူးချွန်အရာအားလုံးမင်းဘ၀မှာပြည့်စုံလာစေဖို့မင်းဘေးနားမှာ ထာဝရရှိနေချင်မိတယ် .. ။
သစ္စာဆိုတဲ့ခြံစည်းရိုးနဲ့ဘောင်ခတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းပန်းပွင့်တွေအတူတူခူးဆွတ်အချစ်စစ်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့အကြင်နာမေတ္တာနှလုံးသားအိမ်လေးထဲမှာနားလည်ယုံကြည်မှုအခြွှေအရံတွေနဲ့မင်းရင်ခွင်မှာနားခိုချင်မိတယ် .. ။
နွေနေပူမှာလည်းအတူတူလေပြေနုတွေလည်းအတူတူခံစားကြမ်းတမ်းတဲ့မိုးရာသီခရီးမှာလည်းမခွဲအတူယှဉ်တွဲသွားရင်းအေးစက်စက်ဆောင်းလရာသီမှာလည်းမင်းနဲ့အတူ ရှိနေမယ့်သူပါ .. ။ ချစ်တတ်သူများအားလုံး ချစ်သူများနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင် .. ။ ဒီလ (၇)ရက်နေ့မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာမှမရေးဖြစ်ခဲ့တာမို့ ချစ်သူများနေ့အမှတ်တရအဖြစ် အယ်စိုင်းဇီသီချင်းအချို့မျှဝေခံစားပေးလိုက်ပါသည်။
February 14, 2008 @ 6:35 am Reply	That’s extremely romantic. Really enjoyable to read through. Good luck, sis.
February 14, 2008 @ 6:48 am Reply	စာလေးကဖတ်ရင်းနဲ့သာဆုံးသွားပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တယ် ။ ကဗျာဆန်တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ အချစ်တွေက ထင်ဟပ်နေပါတယ်လင်းရေ။ လင်းရဲ့ချစ်သူနဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
Comment by စိုင်းကျော်စွာ
February 14, 2008 @ 7:24 am Reply	ညီမလေးရေ…
Happy valentine’s day ညီမလေး ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲမဖြုတ်စတမ်း ဘ၀တလျှောက် ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ…။ ညီမလေး ကံကောင်းပါတယ်…. ညီမလေးရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကိုအားလုံးနီးပါး ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..။
Comment by ပြည့်စုံ
February 14, 2008 @ 9:17 am Reply	အချစ်များနဲ့ ထုံမွှမ်းသော autobiography တစိတ်တပိုင်းလေး ထင်ပါရဲ့.. ခံစားသွားပါ၏။
Comment by မေငြိမ်း
February 14, 2008 @ 10:26 am Reply	People are Starving…..
February 19, 2008 @ 7:36 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI